कोरियामा चार बर्ष कमाएको पैसा ड्र्यागन फ्रुट खेतीमा लगानी,करोडौँ कमाई ! – Kantipur Press
कोरियामा चार बर्ष कमाएको पैसा ड्र्यागन फ्रुट खेतीमा लगानी,करोडौँ कमाई !
पछिल्लो समय अत्य’धिक बजार माग भएको ड्रागन फ्रुटको बागलुङमा समेत व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको छ। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–१ पाला करिनाका प्रतिमान थापाले वैदेशिक रोजगार पछि गाउँको बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती थालेका हुन्।
अबको १५ महिनापछि यी विरुवाले फल दिन सुरु गर्ने उनी बताउछन्। थापाले बिरुवा लगाउने समयमा माटोको परीक्षण गरेका थिए। यो खेती एक हजार ५०० उचाइभन्दा तल राम्रो हुने गर्दछ । थापालाई यसको उत्पादन भएपछि बजारको अ’भाव नहुनेमा ढुक्क छन्।
अहिले यसको बजार मूल्य प्रतिगोटा २०० देखि ३०० पर्ने थापाको भनाइ छ। यो फल खेतीका लागि अन्य बालीलाई जस्तो धेरै मेहनत गर्न नपर्ने र सुरुमा सिमेन्टको पोल बनाएर बिरुवा लगाई दिए राम्रोसँग सर्ने थापा बताउछन्। थापाले आगामी दिनमा ड्रागनसँगै अकबरे खुर्सानी खेती गर्ने सोचमा छन्।
दक्षिण कोरियाले अर्को महिनादेखि कोरोना प्रतिबन्ध हटाउने
दक्षिण कोरियामा विदेशी कामदारको चरम अभाव,कृषी तथा पशुपालन क्षेत्र टाट पल्टने अवस्थामा !